Wararka Maanta: Talaado, Aug 7 , 2018-Hablihii ugu badnaa oo Jaamacadda Nugaal dhameystay
Talaado, August, 07, 2018 (HOL) – 68 arday oo 99 ka mid ahi ay hablo yihiin oo afar kuliyadood dhamaystay Jaamacadda Nugaal ayaa munaasabad weyn loogu qabtay Laascaanood xarunta gobolka Sool.
Munaasibad aad loo soo agaasimey oo lagu qabtay Hoolka Jaamacada ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiinta degmada, bahda waxbarashada, ardayda iyo waaliidiin ayaa waxaa lagu soo bandhigay taariikhdii Jaamacada Nugaal.
Madaxa Jaamacada C/risaaq Lafoole ayaa waxa uu sheegay in difcadan oo ah tii 11aad ay tahay tii ugu nasiibka wacnayd marka loo eego heerarkii ay soo mareen.
Lafoole waxaa uu ugu bishaareeyey Ardayda in cidii sii wadanaysa waxbarashadadeeda dalka Suudaan ay aqoonsi buuxa ka heleen.
Qaar ka mid ah ardayda dhamaysatay heerka waxbarsho oo halkaasi ka hadlay ayaa muujiyey niyada fiican iyo muhiimada maalintani u leedahay.
"Afar sano ayaan sugayey maanta inaan gaadho Illaahayna waa igu simay, dadaalkeedana waan la imid, wàalidkayna waan uga Mahad celinayaa" sidaa waxaa yiri Mustafe Maxed Cabdi.
Gudoomiyaha degmada Laascaanood C/casiis Xusseen Xassan oo soo gabagabeeyey ayaa waxa uu balan u qaaday wixii ay ka hawlgelin karaan dhalinta in ay hawlgelin doonaan.
Munaasibadan ayaa si aad ah dadka indhohooda waxaa u soo jiitey iyadoo ay ahayd markii u horeysey ee la arko hablo aad uga badan wiilasha goob waxbarasho.